I-L'Antica Latteria Ice Cream Bar - i-Messina
7:00 kuya ku-20:30
"I-L'Antica Latteria" I-Ice Cream Bar - i-Messina
Ukunambitha, ubuhle nesiko enhliziyweni kaMessina.
4.9 /5 amavoti (amavoti angama-21)
"I-L'Antica Latteria" I-Ice Cream Bar eMessina kuyinto engokoqobo manje eyaziwa yibo bonke abantu base-Messina ngenxa yomdlandla wesiko kanye nesipiliyoni esitholwe ngaphezulu kweminyaka yokusebenza endaweni kulungiswa amakhono endawo nazo zonke izinhlobo ze Ubuhle. Il iphuzu lomhlangano imele i I-ayisikhilimu eyenziwe ekhaya, Ama-aperitifs, ama-cocktails futhi ikakhulukazi kulabo abadumile I-granite nge-Cream ne-Brioscia.
"I-L'Antica Latteria" I-Ice Cream Bar Messina - Indaba yothando ukunambitheka
Il "I-L'Antica Latteria" I-Ice Cream Bar isifuba somcebo se Ubuhle e Amafreyimu okudlula enkabeni ye Messina ngobuhle bamalungiselelo ayo. Kuyo yonke le minyaka sekuyindawo ethandekayo kuyo ukuzikhipha kubantu bayo yonke iminyaka, noma ngabe izingane ezincane noma abantu abadala abathanda ukuzilolonga neyodwa granita ne i-broscia AmaSicilian noma nge I-ayisikhilimu eyenziwe ekhaya. Kuyo yonke iMessina kwaziwa i Okhilimu beqhwa della Isitolo se-ayisikhilimu "i-L'Antica Latteria" okuthi, kulungiselelwe ngezithako ezintsha nezingokoqobo, manje sekubalwa phakathi kokuhamba phambili kulo lonke idolobha.
"I-L'Antica Latteria" I-Ice Cream Bar - Isifiso Esingaphelelwa Isikhathi Sokulunga
bar e I-Gelateria edambisa izinhlamvu zokunambitha zabancane nabadala nsuku zonke, Ubisi Lwasendulo kanye iphuzu lomhlangano yabo bonke labo abathanda ukuqala usuku ngokuzithoba ngenhliziyo enhle, bahleli etafuleni lamabha futhi ngithokozise inkampani kanye nenhlonipho yabasebenzi bayo ngenkathi bedla isidlo sasekuseni. Lapha bangakwazi ngempela ukunambitha ama-croissants amnandi ephelezelwa yi-cappuccino, ikofi noma granita izithelo no-ukhilimu ne-brioche, indlela engenakuqhathaniswa yokuqala usuku.
Iphoyinti lomhlangano "L'Antica Latteria" isitayela se-ayisikhilimu - Ibha ye-Cocktail namalungiselelo we-confectionery yendabuko
lokhu bar ayaziwa kuphela ngemikhiqizo yendabuko yasendulo, efana nama-croissants, ikofi, i-cappuccinos, okhilimu we-artisan nama-granitas, kodwa futhi ne-ricotta cannoli, amakhekhe ahlotshisiwe nezithelo, okumnandi i-cocktail, ushokolethi oshisayo, i-semifreddo, ama-truffles, i namakhekhe namabhisikidi, kepha nama-babas ayisikhilimu asendulo, ama-puff pastries amnandi nokunye. Konke kulungiselelwe ngabapheki abanamakha be-khekhe nabenzi be-ayisikhilimu kule bar bar ye-ayisikhilimu, okuthi kule laboratri enkulu bajabulele ukudala imisebenzi yangempela yobuciko: kulapha ukuthi uphudingi, i okuzenzela u-ayisikhilimu nayo yonke leyo mikhiqizo yezingcweti eseyenze yaduma ngokuhamba kweminyaka.
"L'Antica Latteria" ice cream shop - Ukukhetha kwezithako zangempela
Ubisi Lwasendulo kungumphumela wesiko elinikezwe kusuka kubaba liye kudodana ukuhambisa isifiso esingaphelelwa isikhathi kuwo wonke amakhasimende angabongi ubuqiniso nokunambitheka okuqotho kwemikhiqizo enikezwayo, kepha nobungcweti nokuhlonipha abasebenzi. Ngisho nalabo abadinga i-dessert yomcimbi okhethekile, bayazi ukuthi bangathembela kulaba ochwepheshe abazobhekela ukwanelisa zonke izicelo. Il Ibha ye-Ice cream parlor "Antica Latteria" a Messina ngakho-ke akuyona i-a ibha lapho ungathenga futhi unambithe khona imikhiqizo yasendulo ye-confectionery yesiko leMessina, kodwa futhi nendawo enhle yokuhlangana lapho ungahlangana khona nganoma yisiphi isikhathi sosuku ukuze uphumule, uxoxe futhi ujabule ngokunambitha.
Ikheli: UVia Luciano Manara, 61
Ucingo: 090 2923698
Inombolo ye-VAT: 03188490837
2 amaviki edlule
Isitolo esihle kakhulu se-ayisikhilimu edolobheni, imikhiqizo esezingeni eliphakeme kanye namanani eGranite, i-Ice Cream, Amakhekhe namabhisikidi wonke ama-vegan nawo. Zonke izingcweti ??